Vaovao - Fikojakojana ny milina fanaovana vy tsy misy vy
Milina fantsom-bozaka sy fantsom-bozaka
Hetezo hatramin'ny tsipika lava
Masinina miorina CZ Purlin
Milina mitaingina mihorona
Milina haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha
Milina Seam Roll miorina
Masinina miorina amin'ny Highway Guardrail
Masinina tariby sy tariby
Masinina fanaovana tariby mahitsy
Andalana famokarana herinaratra
Masinina Fefy Chain Link
Masinina tariby haingam-pandeha haingam-pandeha
Masinina fanaovana haingam-pandeha haingam-pandeha
Fikojakojana ny milina fanaovana fantsom-by
Miaraka amin'ny fampiroboroboana ny indostria, ny fampiharana ny milina fanaovana fantsom-by tsy manara-penitra dia mihabetsaka hatrany, na ny fikojakojana ny fitaovana tsirairay amin'ny toerany, dia misy fiantraikany mivantana amin'ny kalitaon'ny famokarana, ary koa ny ain'ny serivisy amin'ny fitaovana. Ny fikojakojana tsara dia mety hanatsara ny fiarovana sy ny fitoniana, hahazoana antoka fa ny famokarana ny fanatsarana kalitao avo lenta. Fa raha tsy mahazatra anao ny milina fantsom-boaloboka fanaraha-maso vy dia mety tsy ho afaka manomboka ny fikojakojana azy ianao. Avy eo ny manaraka dia hampahafantatra ny asa fikojakojana ny milina fanaraha-maso fantsom-by fantsom-by, antenaiko fa afaka manampy anao izy ity.
1. Ny fikirakirana herinaratra an'ny fantsom-by fantsom-boaloboka dia manara-dalàna ny fiovan'ny hafainganam-pandeha.
2. Ny frame marindrano dia fefy mihodinkodina, ny fihodinany amin'ny alàlan'ny boaty turbo-worm sy ilay mpikambana, izay mahatonga ilay singa ho mora ampiasaina kokoa ary milamina kokoa ny mihodina.
3. Ny masinina sy ny haben'ny fananganana dia entin'ny motera tokana miaraka amina rafitra mirindra. Ny fikolokoloana dia tena tsotra, ary mora ampiasaina.
4. Ho an'ny fametrahana paompin-tsolika ao amin'ny masinina fanamafisana anatiny, na dia misy sivana anatiny aza dia mbola mila manatanteraka asa fanadiovana tsy tapaka ireo mpanjifa mba hahazoana antoka fa tsy ho sakana ny paompy solika. Ny dian'ny rivotra misy ny sensor oxygen dia tokony diovina tsy tapaka koa hisorohana ny menaka be loatra amin'ny fanakanana sy ny lalan-kely.
5. Ny fehezam-pandrefesana dia mandray rafitra mihodina efatra azo ampiasaina amin'ny cantilever izay azo ratra mandritra ny fiasan'ny singa, izay afaka mampihena ny fotoana fiomanana ary ahafahana mamokatra tsy an-kijanona ilay fantsona nefa tsy misy fanjaitra.
6. Ny toerana mijidina dia azo ahitsy mitsivalana na tsirairay ao amin'ny fotony, ary azo ovaina miolaka koa izy io.
7. Ny afovoan'ny spindle an'ny grinders roa voalohany ary ny afovoany mihodina dia azo ahitsy, ary ny seam seam dia voalamina avy amin'ny lafiny roa amin'ilay lalana mihodinkodina. Ny afovoan'ny farany dia ny afovoan'ny welder, ary ny seam seam dia mihodina mivantana amin'ny zoro 90 degre mankany amin'ny tsipika mihodinkodina, ka mahatonga ny effet polishing ho tsara kokoa.
8. ny endriny marindrano dia lafiny roa amin'ny sisin'ny famakafakana, raha ilaina ny manolo ny volory, vahao ny bolts manamboatra fononteny ivelany, ny fanamafisana ny vata amin'ny lafiny roa, fanitsiana malefaka.
Ity voalaza etsy ambony ity dia momba ny asa fikojakojana mifandraika amin'ny milina fantsom-boaloboka fanaraha-maso tsy misy fangarony, manantena fa afaka manampy anao izy ity.
Fotoana fandefasana: Dec-16-2020
Room A309, No.7178, Zhong Chun Road, Distrikan'i Min Hang, Shanghai, Sina
Fandehanan'ny fizotran'ny pip matetika mihombo ...
Ny tsenan'ny tsenan'ny Equipe Pipe Welded ...
Ny tombony azo avy amin'ny vy tsy misy vy ...
Fikojakojana ny vy tsy misy vy Sodina Makin ...